Sida Loogu Doorto Ilmahaaga Iskuul Fiican | Boston School Finder
Sida Loogu Doorto Ilmahaaga Iskuul Fiican
Waa maxay dugsi “aad kuugu haboon”?
Waxaa badanaa nala waydiiyaa dugsigee ayaa ah dugsiga ugu fiican. Waa maxay jawaabteenu? Way adag tahay. Waxaan aqoonsanaa dookhyo dugsiyo badan oo aan u diyaarinaysa qoysaska reer Boston qoys kasta iyo cunug kastana waa mid kaduwan kuwa kale. Dugsi aad kuugu habboon waxa uu si ka duwan kuwa kale ugu muuqan karaa qoys kasta—oo xataa waxaa fikrado kala duwan ka qabi kara ilmo kasta oo ka wada tirsan hal qoys.
Boston School Finder waxay fahansan tahay in hanaannada xulashada dugsiga, diiwanagalinta, iyo qoristu culays ku noqon karaan qoysaska. Tusmadaan waxaa loogu tala galay inay kaa caawiso sidaad uga fakari lahayd waxa dugsi aad kuugu haboon uga dhigan yahay qoyskaaga iyo sida aad ugu raadin karto dugsi aad ugu haboon cunugaaga. Adoo raacaaya fakarka muhiimada qoyskaaga ee waxbarashada cunugaaga, tusmadaan ayaa kuu fududayn karta sidii lagaaga caawin lahaa doorashada dugsiga ugu haboon baahiyaha iyo muhiimada cunugaaga.
Daraasad ayaa muujinaysa in doorka waalidku ku leeyahay dugsiga ay saamayn wanaagsan ku leedahay xadirista ardayga iyo aqoontiisa cilmiyeed, marka aan biloowno!
Tallaabada 1: Abuuro liiskaaga muhiimadaha.
U adeegso su'aalaha hoose si ay kaaga caawiyaan aqoonsiga waxa muhiimada koobaad u leh qoyskaaga iyo dugsiga iyo waxbarashada cunugaaga. Kajawaab su'aalaha hoose si aad u go'aansato tayooyinkaaga "ay qasabka ah tahay inaad lahaato": kuwaani waa tayooyooyinka dugsiga cunugaagu ay qasab tahay inuu lahaado kuwaasoo muhiimada koobaad aad siinayso markaad doonayso dugsi.
Sidoo kale ka fakar: waa maxay nooca bii'ada uu cunugaygu u baahan yahay inuu wax ku barto? Maxaa muhiim u ah qoyskayga? Xasuusnoow: waxaad tahay qofka khibrada u leh cunugaaga!
MAADOOYINKA CILMIGA: Waa maxay muhiimadaha aan siinaayo khibrada waxbarasho ee cunugayga?
Cunugaygu waxa uu baranayaa akhriska iyo siduu uga shaqayn lahaa xisaab waafaqsan himilooyinka da'diisa.
Waxa uu leeyahay xariir gaar ah ama qaab barasho (tusaale, Katooliga, xariirka diimaha kale, Montessori, Reggio-Emilia, Waldorf, habab kale oo wax lagu barto)
Wuxuu si gaar ah diirada u saaraa maado gaar ah (tusaale. Sayniska, Xisaabta, Farshaxanka, Barashada Luuqadda)
Waaxda waxbarashada gaarka ah oo adag ama barnaamijka
Qaybta Bartaha Luuqada Ingiriiska oo adag ama barnaamijka
Cabbirka fasalka: Waxaan doorbidayaa inaysan jirin wax ka badan _____ carruur ah fasal kasta.
Muhiimadaha kale ee waxbarasho
AMMAANKA: Maxaa ka dhigaya ilmahayga inuu dareemo jir ahaan iyo shucuur ahaanba inuu ku nabad qabo dugsiga?
KALA DUWANAANTA ARDAYDA: Sidee adiga muhiim kuugu tahay kala duwanaanta isirka iyo/ama dhaqan dhaqaale ee ardayda iyo qoysaskooda?
KALA DUWANAANTA SHAQAALAHA: Sidee ayey muhiim kuugu tahay kaladuwanaanta shaqaalaha dugsiga (tusaale ahaan, macallimiinta, maamulayaasha, takhasuslayaasha, iwm)?
BOOSASKA BARASHADA: Waa maxay tasiilaadka ay qasab tahay in dugsigu leeyahay?
Qolka farshaxanka ama istuudiyaha
Garoonnada ciyaaraha fudud
Garoonka ciyaaraha ee weyn
BARNAAMIJYADA: Waa maxay barnaamijyada ay qasabka tahay inay ka jiraan dugsiga?
Farshaxanka wanaagsan ama jilitaanka
GAADIIDKA: Waa maxay baahiyaha shaqo ee ay tahay in loo buuxsho qoyskaaga?
Gaadiid la siinaayo
Gaadiid soconaaya wax ka yar _____ daqiiqo
Distance less than _____ Mayl
Waqtiga biloowga: _____:_____ AM
Waqtiga dhammaadka: _____:_____ AM
Barnamaijka dugsiga kahor ee la heli karo
Barnamaijka dugsiga kadib ee la heli karo
Labiska qasabka ah
QARASHKA: Ma doonaysaa inaad ka baaraan dagto dugsiyada lacagta ah (qarashka la baxsho) si cunugaagu u dhigto?
Haa, kaliya haddii aan helno kaalmada maaliyadeed ama deeqo waxbarasho
ISGAARSIINTA: Sia ay tahay in dugsigu ulasoo xariiro qoyskayga?
Qof wacyigelin qoys ku sameeya dugsiga ama barnaamij wacyigelin siiya qoyska
Macluumaadka oo loo turjumay luuqad gaar ah
Maamule ama macalin ku hadla luuqad gaar ah
Ka qaybgalka qoyska: Ilaa xad intee le'eg ayaad rabtaa inaad door ku yeelato dugsiga qaab noocee ah ayaadna rabtaa inaad door ugu yeelato?
Tallaabada 2: Samee liiska dugsiyada aad xiisaynayso oo akhri dhammaan macluumaadka la heli karo ee dugsi kasta.
Adeegso qorsheeye si aad u qorto dhammaan dugsiyada aad ka baaraan dagayso si aad ula socoto macluumaadka aad soo aruurisay kahor inta aadan go'aanka booqashada dugsiga. Ka dib, adiga oo ku saleynaaya baaritaankaagii ugu horreeyay ee dugsi kasta, go'aan ka gaar in aad shakhsi ahaan u soo booqaneysid dugsiga iyo in kale.
Markaad liis gareynaysid, tixgeli waxyaabaha soo socda: dugsigaan miyuu ku habboon yahay ubadkaaga? Ma rabtaa inaad soo booqato dugsiga?
Waxaan kugula talineynaa inaad booqato ugu yaraan labo ilaa seddex dugsi, in kasta oo aad dooran karto inaad booqato tiro kasii badan. Dugsi kasta oo liiska kujira, samee daraasada bilowga ah ee soo socota:
Booqo webseetka dugsiga
Booqo bogga fariimaha ee dugsigu ku leeyahay Twitter ka (hadduu leeyahay)
Booqo Bogga Facebookga ee dugsiga (hadduu leeyahay)
Kafiiri bogga Aqoonsiga dugsiga halkaan oo ah barteena webseetka
Kadib markii aad dhammaystirto baaritaankaaga tooska ah ee khadka oonleenka ah, ka fiirso: ma heshay macluumaadka aad u baahan tahay mase kuu fududeyd inaad fahamto?
Talaabada 3: Ka hel macluumaad dheeraad ah ilaha aad ku kalsoontahay haddii aad wali su'aalo ka qabtid dugsi kasta.
Weydii laba illaa saddex saaxiib, ehel, ama xubin bulshada oo kamid ah waxay ku jecel yihiin ama aysan ku jeclayn dugsiga ilmahooda. Qor qaar ka mid ah fikradooda si ay kaaga caawiyaan inaad gaarto go'aannada booqashada dugsigaaga. Weydii waxyaabaha soo socda:
Dugsigee ayuu cunuggaagu dhigtaa oo fasalkee buu ku jiraa?
Maxay ku jecel yihiin/ku daneeyaan dugsiga ilmahooda?
Maxay jeclaan lahaayeen in isbadal lagu sameeyo dugsiga cunugooda?
Tallaabada 4: Jadwalka booqashada (booqashooyinka) dugsigaaga.
Booqo Kalaan darka Diiwaangelinta Dugsiga si aad u aragto boorarka macluumaadka ee dugsiga ee aad heli karto iyo taariikhaha/waqtiyada lasoo booqanaayo dugsiyada aad xiisaynayso.
Haddii aysan jirin wax kamid ah taariikhaha ama waqtiyada oo kuu shaqayn kara, wac ama iimeel u dir dugsiga si aad waqti kale u qabsato. Halkaan waxaa kujira qoraal aad ku isticmaali karto taleefanka ama emayl ahaan:
Qoraalka Codsiga Booqashada Dugsiga
Magaceygu waa _____ waxaanna ii jooga ilmo galaaysa fasalka _____ xilliga deyrta ee sanadka soo socda. Waxaan ka fiirsanaynaa dugsigiinu inuu noqdo dookha cunugayaga. Waxaan jeclaan lahaa inaan soo booqdo dugsigiina oo aan soo arko, laakiin taariikhaha/waqtiyada aad soo dhajiseen in la idin soo booqan karo way khilaafsan yihiin jadwalka aan firaaqada leeyahay.
Goorma ayaan soo booqan karaa dugsigiina?
Waxaan imaan karaa taariikhahaan iyo waqtiyadaan: [ku qor liiska taariikhaha iyo waqtiyada halkaan]. Fadlan maan qabsan karaa jadwal booqasho aan idiin ku imaado mid kamid ah waqtiyadaan?
>>> Haddaad u baahato ku dar:
Si faseex ah uguma hadlo luuqada Ingiriiska. Afkayga hooyo waa [luqaddaada ] waxaanna u baahanahay turjubaan ku hadla luuqadaan inta aan booqanaayodugsiga.
Waad ku mahadsan tihiin kaalmadiina.
Magacaaga iyo meesha lagaala so xariiraayo
Talaabada 5: Booqo dugsi kasta.
Waxaan eegay booska uu kuyaalo:
Dibadda dugsigu waxay u muuqataa mid nadiif ah oo si wanaagsan loo daryeelay: aagaga dhismaha, garoonka ciyaarta, banaanka fasallada.
Gudaha dugsiga wuxuu u muuqdaa mid nadiif ah oo si wanaagsan loo daryeelay: fasalada, kafateeriyada, maktabadda, qaybta kombiyuutarka, qolka jimicsiga, musqulaha.
Wadooyinka hoolka ayaa u muuqda kuwa nidaamsan oo amaan ah.
Waxaan fahamsanahay qiyamka dugsiga waxaanan dareemayaa in ubadkaygu si nafsiyan amaan ku helaayo goobtaan:
Dadka waaweyni waxay ula hadlaan dadka kale ee waawayn qaab kalsooni leh.
Ardeydu waxay midba midka kale ula hadlaan qaab kalsooni leh.
Dadka waaweyn iyo ardayda wuxuu midba midka kale ula hadlayaan qaab kalsooni leh.
Dadka waaweyni waxay umuuqdaan kuwo leh dabacsanaan oo dagaan ka muuqato, xitaa haddii ay jirto edeb-darro aydu sameeynayaan.
Waan fahamsanahay sida waalidku ula shaqeyn karaan dugsiga, taasina waxay ku habboon tahay sida aan jeclaan lahaa inaan door ugu yeesho dugsiga.
Waxaan ku qanacsanahay inaan su'aalo weydiiyo hogaamiyaha dugsiga. Waxay uga jawaabaan su'aalahayga qaab isiiya dareen kalsooni.
Waxaan ku qanacsanahay inaan su'aalo weydiiyo waalidiinta ilmuhu u dhigtaan hadda dugsiga. Waxay uga jawaabaan su'aalahayga qaab isiiya dareen kalsooni.
Waan fahamsanahay waxa dugsigu ku fiican yahay iyo waxay ka shaqaynayaan gaaristooda, waana ku qanacsanahay inaan ubadkayga geeyo dugsigaan.
Waan fahmay sida dugsigu u wajaho aqoonta:
Fasalada dugsiga waxaan ku arkaa ardayda oo weydiinaaya su'aalo oo wada sheekaysanaaya.
Fasallada dugsiga waxaan ku arkaa inay macallimiintu waqti siinayaan si ay uga jawaabaan su'aalaha si caqliyaysan.
Fasalada dugsiga waxaan ku arkaa inta badan ardayda oo dhiganaysa, ma ahan kaliya tiro yar.
Waxaan fahamsanahay taageerooyinka jira ee loogu talagalay ardayda la daalaa dhacaysa ama ama aqoontoodu liidato iyo sida loo isticmaalo taageerooyinkaas.
Waan fahamsanahay himilada waxbarasho ee shaqaaluhu ka leeyihiin ardaygayga. Waxaan aamin sanahay in himilooyinkaan ay yihiin kuwo ku haboon da'da waxaana ka caawin doonaa cunugayga siduu u baran lahaan.
Manhajka iyo waxbaridu waa kuwo wax ku ool u ahsidoo looga caawin lahaa cunugeyga sidii uu u hanan lahaa himilooyinkan waxbarasho.
Waxaan arkay heerar kale ee fasalka waxaanan jeclaan lahaa inaan arko canuggayga oo waxyaalahan ka samaynaaya dugsiga.
Waxaan fahansanahay sida dugsigu u buuxinaayo baahiyaha ardayda oo dhan, oo ay ku jiraan ardayda qaba baahiyaha gaarka ah (ayna kujiraan. Barteyaasha Ingiriisiga ama ardayda leh IEP), ama ardayda ka kala yimid dhaqamo kala duwan iyo qoomiyado.
Waan fahansanahay waxyaabaha uu dugsigu haysto, iyo waxyaabaha uusan haysan, oo waxaan ku kalsoonahay heerka adeegyada laga baxsho dugsigaan:
Waan fahamsanahay ururada uu dugsigu iskaashi la leeyahay iyo qaabka ay u wada shaqeeyaan.
Waxaan fahamsanahay caqabadaha ugu weyn ee dhinaca adeegyada iyo sida dugsigu ula tacaalo caqabadahaas.
Waxaan fahamsanahay noocyada taageerada ardaydu sida caadiga ah ay ka helaan shaqaalaha aan macallinka ahayn, sida la-taliyayaasha ama kalkaaliyayaasha caafimaadka.
Waxaan rumeysanahay in dhismayaasha iskuulku ay ku filan yihiin oo ay kaafiyaan baahiyaha ilmahayga.
Waxaan jeclahay barnaamijyada laga heli karo dugsiga (tusaale ahaan, farshaxanka, macallinka muusikada, waxbarashada jirka, iwm.).
Waxaan ku kalsoonahay sida waalidku u taageeraan dugsiga iyo sida taasi u saamayneyso ardayda.
Waxaan ku kalsoonahay sida had iyo jeer uu ilmahaygu fursad ugu helo la-shaqaynta bulshada ka baxsan dugsiga.
Waxaan aaminsanahay in dugsigaan uu ku habboon yahay ilmahayga:
Waxaan fahansanahay inuusan jirin iskuul kaamil ah, uuna dugsigaan buuxsho waxyaabaha qasabka ah inuu cunugaygu helo.
Waxaan aaminsanahay mabaadii'da, aragtida, iyo hogaaminta dugsiga.
Waxaan rumeysanahay in dugsigaani u adeegi karo cunuggayga dhammaan heerarka uu dugsigu awoodo, ma ahan oo keliya fasalka uu cunugaygu galaayo.
Waxaan rumeysanahay in cunugeygu dareemi doono xasillooni, amaan, uuna wax ku baran doono kuna kori doono dugsigaan.